Kedu ka m ga - esi mebe akaụntụ Skype nke adịgboroja? - Skype
Isi > Skype > Fake skype account - otu esi emeso
Fake skype account - otu esi emeso
Kedu ka m ga - esi mebe akaụntụ Skype nke adịgboroja?
Soro usoro ndị a:
Gaa naSkypeweebụsaịtị ma pịa 'Banye' na aka nri aka nri nke mpio ahụ.
Ọhụrụ na peeji nke, pịa “Mepụtaiheakaụntụ'
Tinye ozi niile achọrọ dị ka aha zuru ezu, adreesị ozi-e, ọkacha mmasịSkypeaha na paswọọdụ, mba na asụsụ.
- Hey, onyeisi? Anyị na-na na na na na na na-ekwu okwu na ọ na-ele ka anyị nwere ike mgbe niile na-abịa azụ a na a gasịrị ụbọchị, ị mara, ma ọ bụrụ na anyị nwere. - Gini mere anyi ji mee nke a? Anyị nwere igwefoto. Anyị nwere ụlọ ihe nkiri ahụ.
Anyị na-eme nkwalite maka Skype, nri? - Aka nri, ee, aka - Ya mere anyị n’eme ya. - Ọ dị mma, ee - companylọ ọrụ ahụ chọrọ nkwalite, nri? - Chọpụta, ee. Ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a. - Don lee Ndewo America, Abụ m onye isi oche nke Skype, Landon Bablandananavan.
Ọ gafeela otu afọ kemgbe edere ihe mbụ gbasara COVID-19 na America, na-eweta ọhụụ ọhụụ nke ihe ịma aka onwe onye na nke aka ọrụ nke ọrụ ọgbakọ ga-abụ ndụ nke ọha mmadụ. Naanị m chọrọ ịsị site n'ala ala obi m nye onye ọ bụla nọ ebe ahụ hụrụ nke a, fuck ị! Na-na na na na na gị nzuzu Mbugharị na akaụntụ nke abụọ. Gịnị heck bụ mbugharị? Gịnị heck bụ mbugharị? Kedu ihe bụ nke a? Anyị anọwo ebe a site na mbido, ị nweghị ike ịgwa m na ndị a niile nọ ebe ahụ amaghị Pooh. naanị gbanye m ka m nwee obi ụtọ.
Dị ka Chineke dị ka onye akaebe m, ị na-enweghị ekele, m ga-abọ ọbọ! Skype nọ ebe ahụ site na mmalite, na-enye gị oku ederede tupu ịmara na ịchọrọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị na nso nso a ka ejiri Skype maka ụfọdụ ihe kpatara onye maara ihe? Maara na anyị nwere ihe niile ịchọrọ, dịka omenala. Ọ dị mma? Otu bọtịnụ ịpụ, nweta nke ahụ, akụkụ ọzọ! Ooh! Maka na o doro anya na nke a bụ ezigbo azụmaahịa maka ụfọdụ n'ime gị.
Nke ahụ bụ isi ya. Ọ ga-abụ n'ihi na uzọ ọzọ gịnị ọzọ ị ga-eme anyị ịnyịnya ibu dị ka nke ahụ? Sernụ agwọ na-adịghị eguzosi ike n'ihe! Naanị wetuo obi. Naanị wetuo obi.
Jirila Skype mee ihe dị ka ngwaa. You maara oke ihe nke ahụ bụ maka akara ukwu? mgbe aha ụlọ ọrụ na-aghọ okwu? Ndị mmadụ anaghị achọ ihe. Google na-google ha.
Sky gbasiri ike. Nke ahụ bụ egwuregwu bọl niile. Nke ahụ bụ okpueze dị gị n’aka.
Nwere ngwa anyị na ekwentị gị. I nwere aha anyi n’onu gi. Anyị nọ na-agba ọsọ ma mgbe ahụ anyị kụrụ ihu anyị. Kedu ihe anyị mejọrọ? Kedu ihe Mbugharị nwere ike ịme na Skype enweghị ike? - Ọfọn, Mbugharị nwere ike ịkwado ihe ruru otu puku ndị na - akpọ oku - otu puku? Gịnị mere ị ga-eji kpọtụrụ otu puku mmadụ na ekwentị? Amaghị m puku mmadụ, ma ya fọdụzie ịgwa ha okwu.
Ihe m na-ekwu bụ na Skype ka nwere ngwa ọrụ edemede maka mkpa gị niile. Gini mere ị ga - eji dozie ihe ọzọ mgbe ị nwere ike ịnwe nke mbụ? Ma gịnị n'ezie? Gini mere i kwesiri Anyị na Skype ga-anọ ebe ahụ oge niile iji nye gị ngwaọrụ ị chọrọ. - Ọ dị mma, nke ahụ dị mma.
Anyị enwere ike ịnwale nke nwere ike ịmacha ntakịrị? - Ee e, anyị nọ na Skype ga - anọnyere gị oge niile Ọ na - enye gị ngwaọrụ ịchọrọ iji nwee ọganiihu ọbụlagodi na ị na - atụda anyị dị ka akpa dị ọkụ nke ihe nwatakịrị mara mma nke na - agagharị na ya. Ooh, I'm Zoom! Leonardo Leonardo DiCaprio-ed anyị! I mere nke ahụ! Unchyọkọ DiCaprios! DiCaprio! DiCaprio! Hydrox bịara tupu Oreos.
You maara nke ahụ? Hydrox bịara tupu Oreos.Betamax bịara tupu VHS.Gobots bịara n’iru Transformers.
Ndi anyi goboti? dị njikere. Ya mere nka bu agha. Don't naghị agagharị n'okporo ámá na-agbụ nwoke ọnụ mmiri n'anya ma na-atụghị anya na ọ ga-ada site na elu ụlọ ime ụlọ gị n'etiti abalị wee gbue akpịrị gị iyi egwu, iwu! Enwere m ike ịchọta n’ime m ịgbaghara gị, ọ bụrụ na ị pụọ, ị nwere ike ịlaghachi.
Ajuju adighi. Maka ndị na-apụbeghi, daalụ. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu ịnwe gị, anyị nwekwara nnukwu obi ụtọ ịkpọsa na anyị na-akwụghachi gị ụgwọ maka ụgwọ ọnụnọ gị ga-emechi ozugbo wee malite ire t-shirts.
See na-ahụ ka nzuzu nke ahụ na-ada? Betrara gị n’enweghị ebe? Kedu ka ọ dị gị? DiCaprio! DiCaprio! Know mara, ọ bụ ihe ijuanya na nne m zigara obere email ụbọchị gara aga na-ekwu na anyị kwesịrị ịmalite mbugharị ezinụlọ. Nne m. Ndewo, aha m bụ Landon Bablandananavan Ana m anwụ.
Ma ugbu a, ndị mmadụ chọrọ mbugharị. M ​​ga-mbugharị! Oh, achọrọ m mbugharị, nwanne nna m na-ehichasị ụgbọala ya na ngwụsị izu a. Ma ugbu a, anyị nwere Microsoft.
Ha ga-ekpochapụ anyị! Anyị agaala ugbu a bụrụ akụkụ nke Otu Microsoft. Nke ahụ dị njọ karịa Mbugharị! Otu! Aghaghị m ịme orthodontist n'ihi na m toro nkwado Ndị otu. Ọ bụrụ na ị nwere ike Skype onye ọlụlụ gị na-ekpo ọkụ ọkụ! Skype na-ada ụda.
Na-ada ka imeghe mkpọ. Skype. Ka m zoba gi.
Enwere ihe eji eme ihe? - Oh, Amaghị m - Ọ dị mma. Mee ka m mara. Anyị nwere ike ịhazi mbugharị ma emechaa.
Chei! Skype! Skype, Skype, Skype! Ọ bụ ihe ọchị ịsị .Crap.
Enwere akaụntụ adịgboroja na Skype?
.B.Skypescammer nwere ike esoro ala! Thesebọchị ndị a ọtụtụSkypescammers na-arụ ọrụ site na Asia, Russia, Marokko na United States eziokwuSkype. Ha na-achọ ụmụ nwoke lụrụ nwanyị na Facebook, Linkedin ma ọ bụ Twitter ma gbalịa inweta ọtụtụ ozi nkeonwe dị ka o kwere mee. Ha ga-ahụ anyaSkypemaka aha gi ma tinye gi.23 nke 2017
Kedu ka m ga-esi mara ma ọ bụrụ na akaụntụ Skype dị adị?
Nanị ụzọ ị ga-mara nke ahụonye ọrụ na-ejiSkypebu site na ichoputa ya na nke anyiSkypendekọ ma ọ bụ belụsọ, ị jụrụ onye ahụ ozugboọ bụrụo nwereAkaụntụ Skype.Ọ bụrụọ na-egosinaenwereAkaụntụ Skypen'okpuru adreesị email ya, mgbe ahụ, ị ​​nwere ikenlelenke yaprofaịlụAma ma ọ bụprofaịlụfoto.
N'oge a, cybercrime na-adịwanye adị ma ọ dị ka anyị niile na-echegbu onwe anyị banyere etu anyị si nwee nchebe na nchekwa nke teknụzụ ọhụụ anyị nwere. O nwere ike ịbụ siri ike, ọ pụrụ ịbụ ihe siri ike mara n'ezie, ma anyị kpebiri itu ọnụ a ole na ole na-enye aka eziokwu ndị pụrụ inyere gị aka mgbe gị na nzuzo bụ n'ihe ize ndụ. Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa Jimmy ebe a, nabata ndị otu abalị, ndị a bụ isi iri na ajụjụ na njirimara mmadụ nke enweghị ihe ọ bụla gbasara egwuregwu.
Nke a bụ ebe uwe mgbokwasị si na m na-eme naanị ọdịnaya m chere na ọ ga-atọ ụtọ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-akụkụ nke a abalị ụyọkọ, jide n'aka na dị ka isiokwu, gbanye gị Ịma Ọkwa otú ị na-na-atụ uche ihe bulite, denye aha gị Ịma Ọkwa na-enye gị ihe kasị mma ohere nke ịhụ ọ bụla isiokwu, karịsịa ndị na ebipụtara n'oge na-adịghị anya tupu anyị abanye na ya. Kedu ihe dị ka ise n'ime ha maka ngụkọta nke $ 250 na ndị mmeri ise, mụ na ụfọdụ ọwa mmiri ndị ọzọ jikọtara ọnụ maka ọnwa nke Ọgọstụ iji mee ihe a dị oke ọnụ maka unu.
Njikọ dị na nkọwa ahụ, e nwere ụzọ isii ị ga - esi sonye, ​​ha niile anaghị akwụ ụgwọ na njedebe nke asọmpi ahụ, anyị ga - enye kaadị onyinye Amazon ise ruru $ 50 maka ndị mmeri ise nwere isi. Yabụ na olile anya ma ọ dịkarịa ala otu Team Chaos ga-abịa. Go banye ma nwee ihu ọma.
Ugbu a, ka anyị gaa ụzọ iri iji hụ ma ọ bụrụ na ha abanyela kọmputa gị. Enwela oke nleda anya ma ọ bụ ihe ọ bụla, ka anyị hapụ ... ka anyị gabiga nke a ọnụ.
Ka anyị malite ndepụta na nọmba iri: gị antivirus software nwere nkwarụ. Ihe izizi dị mkpa ị ga - enweta bụ na ị ga - abanye n'ime ntọala kọmputa gị wee lelee sọftụwia antivirus gị. Ihe dị mma: antivirus gị kwesịrị ịnọ ma na-eme ihe ekwesịrị.
Isi ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị na kọmputa gị nwere ike imebi bụ mgbe ngwanrọ gị nwere nkwarụ ma ị nweghị nkwarụ ya n'onwe gị. Ọ naghị eme naanị ya n'onwe ya, m na-ekwe nkwa. Kwụsị mmemme antivirus na-abụkarị ihe mbụ ndị hackers ga-eme ozugbo ha mebiri n'ime kọmputa gị, ebe ọ ga-enye ha ohere ịnweta kọmputa gị na ozi gị dị mfe.
Na nọmba itoolu, ị na-enweta ozi njehie adịgboroja. Otu ụzọ ndị na-agba ọsọ ga-esi mee ka ị banye n'ime ha bụ iziga gị obere adịgboroja a: 'Hacked kọmputa gị, pịa ebe a iji dozie ya'. Ọbụna ụfọdụ n'ime ha nwere okwu ọnụ kpaliri ha.
Ọ bụrụ na antivirus gị na-arụ ọrụ nke ọma, ọ kwesịrị igbochi ndị mmadụ ịbanye na kọmputa gị ozugbo. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ha chọrọ ka ozi gị, ị ga-echigharịkwuru ha n’onwe gị. Ozi nje virus ndị ahụ bụ ụzọ ndị mmadụ na-esi abanye kọmputa ha ka ha pịa ozi ahụ n'ihi na ha na-echegbu onwe ha.
Ma kama inye aka, ọ na-enye hacker ohere ịbanye na kọmputa gị, ọ dị ka iwere ụlọ gị wee mepee ọnụ ụzọ nke onye ohi, na-enyefe igodo ma sị, 'saying nwere ike ịga ebe a mgbe niile.' Ozi nje virus na-adịkarịghị adị na ọnụọgụ asatọ anyị kpọrọ ozi mgbapụta. Ndị a bụ ndị na-adịkarịghị ebe ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ ma ị ga-abụrịrị ogbi mara mma ịda maka ha.
Mana ... mana ozi mgbapụta bụ mgbe ị nwetara ozi mmapụta na-ekwu na etinyego kọmputa gị na ị ga-akwụ ụgwọ iji dozie ya.
Ka m tinye ebe a: Agwara m gị na ị ga-abụ onye nzuzu mara mma ka ọ daa maka nke a, mana karịa nke ahụ, ahụla m ụfọdụ ndị na ntanetị daa ka njọ. Ya mere ...
Echere m na enwere otu ihe ọtụtụ oge na ozi ndị a abaghị uru ma enwere ike izere site na ịmalitegharịa kọmputa gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịmalitegharị kọmputa gị na ozi mgbapụta ahụ ka dị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ozi mgbapụta ahụ kpochiri gị na ụfọdụ mmemme na kọmputa gị, ị nwere ike ịbanye na nsogbu. Onye ọ bụla na-akpọ pop-asị asị, onye ọ bụla na-ahụ ha, onye ọ bụla kpọkwara ha asị.
Onweghị ihe dị njọ na nke ahụ, mana ọ bụrụ na ị na-enweta mmapụta ugboro ugboro, mgbe ahụ enwere ike ịbụ na ihe adịghị njọ. Dị ka anyị kwuru na mbụ, ihe mbụ ndị omekome na-eme mgbe ha banyere n’ime kọmputa mmadụ bụ iji gbanyụọ antivirus na popup blocker software. Yabụ ọ bụrụ n'ị naghị enweta ọtụtụ ma ọ bụ enweghị popups ma ọlị, na mberede na ị na-enweta mmiri nke ha, ị ga-amaliterịrị ịlele ntọala gị dịka enwere ike gbanwee ihe, ma ọ bụrụ na ịnweghị ' t, steer Anyị laghachiri nọmba 10 na o doro anya na ihe mie kọmputa gị Okwuntughe na mberede na-arụ ọrụ.
Nke a doro anya, mana ọ bụkwa nnukwu ọkọlọtọ na-acha ọbara ọbara ma ọ bụrụ na ị gaa na akaụntụ mgbasa ozi gị ma ọ bụ akaụntụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị na mberede paswọọdụ gị anaghị arụ ọrụ, ị nọ ná nsogbu ị nweta ezigbo mmadụ site na akaụntụ ha site na ịgbanwe paswọọdụ. Ya mere, m na-ekwu na iwu nke isi mkpịsị aka, gbanwee okwuntughe gị oge niile ma amaara m nke ahụ n'ekwughị, mana m ga-ekwu ya na agbanyeghị: ejirila ozi nkeonwe maka okwuntughe gị, ejikwala ụbọchị ọmụmụ, aha ụmụaka, aha nne na nna. ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Mee okwuntughe miri emi, gbagwojuru anya, nnukwu mkpụrụedemede, obere ihe, akara, ihe ọ bụla enyere gị ohere ime ...
Cragbawa Top 5: E nwere software arụnyere na ị kwadoghị. Imirikiti kọmputa agaghị ebudata ngwanrọ ọ gwụla ma ị kwadoro ma ọ bụ dozie ya na mbụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na software amalite nbudata na-enweghị ihe ọ bụla ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ ozugbo maka ihu ọma, mkpa ka ị kwụsị ya ozugbo.
Chọpụta, mgbe ụfọdụ, gị na kọmputa dị na-eme ka a ndudue na downloads a mgbe nile update. Ikekwe ọ bụ mmelite mmelite ma ọ bụ mmelite Microsoft ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ na-agwaghị gị na mbụ, mana ọ bụrụ na ịmalite ibudata ihe site na isi mmalite na-enweghị nkwenye gị, ana m ekwe gị nkwa na ihe adịghị mma ma ama m na ọtụtụ n'ime ya bụ ozi bụ isi na anyị bụ na-agafe. Mana ọ ga-eju gị anya mmadụ ole na-enweta nke a kwa ụbọchị.
nkụnye eji isi mee kpamkpam
Jiri uru nke a, elela anya na isi. Nọmba nke anọ: ibugharị ọchụchọ weebụ. Nnukwu ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị ọzọ bụ mgbe ebugharịrị gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị usoro mgbe ị na-eme nchọgharị na ịntanetị.
N'ihi na nke ahụ bụ etu antivirus si arụ ọrụ, ọtụtụ ndị nje nwere ka itinye ya n'aka onye ọrụ, nke na - ewetakarị ndị na - agba ọsọ iji duhie gị ịpị nje ha. Nnukwu ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị bụ ma ọ bụrụ na a na-ebutegharị gị na ebe nrụọrụ weebụ spam mgbe ị na-ebughị n'uche na ị ga-abanye na weebụsaịtị ndị ahụ ebe ị pịa ihe ma ọ bụ pịa ebe a ma ibugharị gị na-akpaghị aka na ibe ahụ doro anya na ọ dịghị mma , na ọ bụ naanị ihe niile, gị niile buzzers na-aga, gị ọkọlọtọ-acha ọbara ọbara Defcon 5. Jide n'aka na ị na-eleba anya na ntọala gị ma hụ ma ọ bụrụ na agbanweela ihe ọ bụla ma ọ bụ ọ bụrụ na e mebila usoro gị Na nọmba atọ: Ihe nchọgharị weebụ gị nwere ogwe ngwaọrụ ọhụrụ.
Anyị niile ahụla ngwa ọrụ anyị ma ọ bụ ọkacha mmasị nke agbanwere ma ọ bụ ehichapụ site na nwelite ngwanrọ. Ọ bụ ihe na-akpasu iwe nke ukwuu n'ihi na ọ bụrụ na ịchọpụtaghị igbe ahụ, ị ​​ga - enweta ogwe ngwaọrụ ọhụụ ị ga - eme ..
Have nwere ohuru nchọgharị ndabere ọ na-eme n'ọtụtụ buru ibu may nwere ike ịme nyocha mgbe ọ bụla ị wụnye ngwanrọ ngwanrọ, ihe nchọgharị weebụ gị ga-edozi ndabara toolbars na Ọkacha mmasị, mana ọ bụrụ na mgbanwe ahụ mere na-enweghị ịdọ aka ná ntị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe agbakwunyere na ogwe ngwaọrụ gị ma ọ bụ ọkacha mmasị gị, bulie kọmputa gị ozugbo ka mmadụ lelee gị ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ịchọrọ ime iji nweta otu mmemme Malware iji nweta ihe ọ bụla ị chọrọ n'ihi na mgbe agbakwunyere ma wepụ ya na-enweghị ị na-eme ya mgbe ahụ enwere ike dị ukwuu na-arụ ọrụ n'ime kọmputa gị, obere ndị na-eme ihe ọjọọ, ndị mmụọ ọjọọ na-anọ ebe ahụ ma eleghị anya ị dị mkpụmkpụ site na ịhapụ ihe gị. Nọmba nke abụọ: mgbe ndị enyi gị natara akwụkwọ ịkpọ oku soshal midia nke ịzighị. Nke a na - eme na Facebook ọtụtụ mgbe, mana nke ahụ apụtaghị na ọ nweghị nsogbu.
Ọ dịghị onye ga-enwe ike izipu ozi na akaụntụ gị ma gị. Ma eleghị anya, ịpịrị mgbasa ozi ma ọ bụ na-akwado ngwa ngwa na Facebook, mana maka ihe ọ bụla ọ nwere ike ịbụ, ọ bụrụ na nke a emee, ịchọrọ ịgbanwe okwuntughe gị wee lelee ntọala gị ozugbo. Ndị na-agba ọsọ bụ ndị rụrụ arụ na anụ oriri na-enweghị atụ na enwere ọtụtụ n'ime ha, m na-ekwu, ọkachasị na Facebook, na n'ezie m ga-ekwu n'ụzọ ụfọdụ na nke a bụ nnwale nyocha nwa oge 2 maka ihe niile ị nwere ike, ma eleghị anya enwere ụzọ ọpụpụ, ọ bụrụ na enwere oghere, enwere ụzọ ha ga-esi banye mana nke ahụ bụ ihe ga-enwerịrị n'oge a, ọ bụrụ na enwere nhọrọ nyocha nnweta 2, were ya ma gbasaa nke ahụ bụ site na kaadị SIM gị site na ekwentị gị.
Ya mere, gbaa mbọ hụ na onye na - ahụ maka ekwentị gị maara na ị ga - achọ ihe abụọ ma ọ bụ ụdị koodu PIN ma ọ bụ na ọ nweghị onye ga - enwe ike ịnweta ekwentị gị n'ihi na nke a bụ ụzọ iji nweta akaụntụ gị niile. Ọ dị mma, nke mbụ na ndepụta nke taa, nke a bụ ụzọ dị mma iji gwa ma ọ bụrụ na egboro kọmputa gị. Ọ dị mma, òké gị na-emegharị nhọrọ nke aka ya.
Yep, ọ bụrụ na nke ahụ emee, ị kposara, mmanụ a .ụ. Onweghi ihe ọzọ nwere ike ịbịanye mgbe mmadụ ghosthost na kọmputa gị wee chịkwaa ya yana ị nọghị na onye na-ekiri otu egwuregwu na otu enyi ị maara, ọ nwere ike bụrụ na oge agaala. Emeela, i dina fu.
Mee ya ndị enyi m, lee ụzọ iri iji hụ ma ọ bụrụ na kọmputa gị abanyela kọmputa gị. Dị ka m kwuru, ọtụtụ n'ime ha dị mfe ma ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịmaraworị ha, mana enwere ndị nọ ebe ahụ bụ ndị na-enweghị isi na ndị nzuzu, yana olile anya na ọ na-enyere mmadụ aka ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ kọmpụta gị na-agba ọsọ tupu ha enwee ike ichebe hacked '. Anyị nwere ike tinye nke a ọnụ, gbanye ọkwa gị, n'okpuru bụ ndepụta ọkpụkpọ nke akwụkwọ akụkọ abalị ndị ọzọ na-arịgo, ma enwere njikọ ị nwere ike iji nyefee echiche gbasara ihe dị na nke a na usoro Late-night ga-ekwe omume bụ isi iri ma ọ bụ omenala ajụjụ banyere ihe ọ bụla.
Ọ dịghị mkpa, ka ọ na-atọkwu ụtọ. Echere na ị masịrị ya, na-atụ anya na ọ ga-enyere ụfọdụ ndị aka, ma hụ gị n'abalị echi maka nke ọhụrụ.
Enwere ike ịbanye na akaụntụ Skype?
EmebiriAkaụntụ Skypeeji na-eziga ọtụtụ puku ozi spam tupu akpọchiri ha na ndị nwe ha ga-enwetaghachi ohere. ... Ọ bụrụ na paswọọdụ ahụ abụghị nchekwa ma ọ bụ na ị jiri ya ebe ọzọ mgbe ahụ hackersnwere ikejiri ya nweta ohereSkype, na-agafe ihe nyocha abụọ nke Microsoft nyere.8 nke 2016
Enwere ihe dị ka akaụntụ adịgboroja Skype?
Akaụntụ skype m bụ nke adịgboroja yana akaụntụ xbox na aha m site na iji adreesị email m. Biko achọrọ m enyemaka iji hichapụ akaụntụ abụọ ahụ. Ekpochiri thread a. Can nwere ike ịgbaso ajụjụ ma ọ bụ votu dị ka enyemaka, mana ị nweghị ike ịzaghachi eri a. Banye na akaụntụ Skype gị na skype.com na ihe nchọgharị weebụ.
Kedu otu m ga-esi kwụpụ akaụntụ Skype m na akaụntụ Microsoft m?
Banye na akaụntụ Skype gị na skype.com na ihe nchọgharị weebụ. 2) Gaa na ntọala akaụntụ gị: pịgharịa gaa na ala nke ibe weebụ wee pịa Ntọala Akaụntụ n'okpuru Ntọala na Mmasị. 3) Next na akaụntụ Microsoft gị, pịa Unlink nhọrọ.
Kedu ka m ga-esi banye na akaụntụ Skype ọzọ?
1: Your gateway kwupụta hacking ọzọ onye ọrụ na akaụntụ Skype bụ site na nbudata na wụnye Skype Hacker ngwá ọrụ na PC gị. 2: Ozugbo ebudatara, tinye aha njirimara nke lekwasịrị Skype akaụntụ na 'Target Skype Aha ojii' ohere. NDMỌD address: Etinyela aha email aha gị dị ka ngwa anataghị ikike Skype agaghị enwe ike weghachite paswọọdụ.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m Chefuru paswọọdụ Skype m?
3: Na ibe weebụ gi ohuru, n'okpuru “Gini mere ị gaghi abanye?” nhọrọ, họrọ 'echefuru m paswọọdụ m' wee pịa nhọrọ 'Ọzọ'. 4: Peeji na-esonụ, tinye Microsoft akaụntụ nkọwa nke zube Skype akaụntụ. Ndụmọdụ: must ga-enwerịrị nkọwa ndị a.